होस पु-याएर किनौँ खसीबोका
चाडैचाडको देश नेपालमा मुखैमा दशैंँ आइपुगेको छ । चाडबाडको विशेषता भनेको मासुका व्यञ्जन, परिकार तयार गरी घर परिवारका लागि मात्र नभई इष्टमित्र, माइती, ससुराली खलकमा कोसेली बाँडी रमाइलो मनाउनु पनि हो । हुन त बढ्दो सहरीकरण अनि विद्युतीय सञ्जालको प्रभावका कारण आजका हाम्रा प्लस–२ का पुस्ता पश्चिमी सभ्यताका अभ्यस्त भइसकेका छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दरवारमार्गमा खुलेका केएफसीको पसलले काठमाडौंको टोल–टोलमा आफ्नो व्यापार विस्तार गरेको मान्न सकिन्छ । भनिन्छ, मासुको उपभोग, उपभोगको वृद्धि हुनु भनेको, व्यक्ति अनि समाजको आयस्तर वृद्धि हुनुको मापक पनि हो । तर गरिब सुकुम्बासी अनि ज्यालादारी, बनीबुतो गरी खानेहरुको लागि त चाडबाड कुर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि ऋण काढी भए पनि । कुरोको चुरो त यहाँ छ, यसपालिको दशैंँ चाडबाड खसी, बोको अथवा भन्नैपर्ने हुन्छ, भन्नलाई त चाडबाड अझै हिन्दूहरुको महान् चाड तर हाम्रो आफ्नो परिवेशमा जस्तो किसिमको जनघनत्वको बसोबास छ । चाडबाडमा पुग्नेजति मासु, त्यो मासु पसलमा किनेर नपुग्ने । आफ्नो धर्म, रीति, परम्पराअनुसार आफ्नो गच्छेलाई भ्याए पनि नभ्याए पनि एउटा, पशुपक्षी आफ्नो कुल देवतालाई बली चढाउनैपर्ने अझ एउटा घोर्ले खसी । हाम्रा गाउँघरतिर त बूढापाकाले यसपटकको चाडबाडमा, खसीबोका च्याङ्ग्रा वध गरेपछि अर्को वर्षलाई गोठमा भएको पाठापाठीलाई अर्को वर्षका लागि तयार पार्थे । तर आजको सहरी पुस्ताका लागि बढ्दो सहरीकरणको प्रभाव खेती तथा पशुपालनका लागि चाहिने ठाउँको संकुचनले गर्दा यो असम्भव मात्र हैन दुरुह कार्य हुन जान्छ । त्यसैले मुखमा नै आएको दशैंँको लागि चाहिने खसी, बोका च्याङ्ग्राको हाम्रो स्रोत कि त ग्रामीण क्षेत्रमा भएका आफन्तले खसी, बोका पालेको भए कोसेली पठाइ पो दिन्छ कि त्यो पनि विगतको डेढ दशकको विविधखाले द्वन्द्वका कारण के तराई के मधेश, के पहाड सबैतिरका आफन्त यही सहरमा पाहुना लागेका छन् ।
विकल्प के त ? खाद्य संस्थानले खसी, बोका र च्याङ्ग्रा ल्याई मूल्य तोकी बिक्री गरी हाले आफू जाँदा आफ्नो भागमा किन्नै मन लागे पनि पनि पाइएला वा नपाइएला, पाइहाले छिट्टै पुगेको छिमेकीले छान्दा बाँकी रहेको पनि भाग नपर्ला भन्ने डर पनि छ । त्यसबाहेक यस काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने नियमित रुपमा खसी, बोका, च्याङ्ग्रा किन्ने ठाउँ भनेको कलंकीको खसीबजार, टुकुचाको खसीबजार त हुँदै छ, त्यसबाहेक त्यस बेला बाटा, चौबाटामा पनि खसी, बोका, च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न राखिएको पाइन्छ । समस्या अलिकति मूल्यमा पर्नसक्छ । सरकारी स्तर बजार अनुगमन थालिएको हुन्छ । यसबारे अन्तिम निर्णय त उपभोक्ता तथा बिक्रेताको समझदारीको कुरा भयो ।
समस्या कहाँनिर छ ? आजको काठमाडौंको बसाइ अलि बेग्लै छ, घर त आफ्नो छ तर बहाल पनि लगाइएको छ । पहिले नै खसी, बोका किनी ल्याउ, बहालमा बस्नेलाई झिझो लाग्ला भन्ने डर वा घरधनीले कचकच गर्ला भन्ने डर । अनि यसको एउटा समाधान त छ त्यो के भने, घरमा साइत पनि जुरायो, पानी पनि ततायो अनि खसी, बोका किन्न हिँड्यो, जे मूल्यमा आफ्नो गच्छेअनुसार को खसी, बोका ल्यायो अनि बली चढायो । यो नै व्यावहारिक देखिन्छ । यदि पहिला नै खसी, बोका खरिद गर्ने सोच्नुभएको छ अनि घरमा राख्ने ठाउँ पनि घरबेटी, बहालमा बस्नेको त कुरा छिमेकीले पनि कचकच गर्दैन भन्नेमा आश्वस्त हुनुहुन्छ भने । खसी किन्दा डम्म पेट भएका, लौ यो त खासै रहेछ भनी नकिन्नुहोला । त्यसबेला खसी, बोका मोटाघाटा देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएको हुनसक्छ । किनभने त्यसबेला खसी बिक्रेताले यो यति किलोको है भनी मोल भाउ गर्ने गर्छन् । त्यतिबेला खसी, बोका किनिहाल्नुभयो भने घरमा ल्याई वध नगरिन्जेलसम्म थप अन्न खान नदिनुहोला । किनभने त्यो खसी बोकाले पहिले नै जोहो गरिसकेको हुन्छ । अन्यथा तपाईंको खसी, बोका फेरि अस्पताल पु-याउनुपर्ने हुन्छ । बरु बली चढाउने खसी, बोका च्याङ्ग्रालाई खाली सादा पानी, थोरै मात्रामा स्याउलो वा इलेक्ट्रो लाइट दिए पुग्छ ।
त्यसो गरियो भने त्यो खसी, बोका च्याङ्ग्राले पहिला खाएको अन्न, घाँसपात पची शरीरबाट मलमूत्रका रुपमा विसर्जन गर्छ अनि तपाईंले वध गर्दा त्यसको जीउमा लादी पनि कम हुन्छ । आन्द्राभुँडी सफा गर्न पनि कम झन्झटिलो हुन्छ । यसभन्दा अझ फाइदा यसमा पो छ, त्यो खसी बोका च्याङ्ग्राले खाएको अन्न घाँसपात, उसको शरीरमा चय/अपचय हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने विष विषाक्ति पनि उसको शरीरबाट बाहिरिएको हुन्छ । जसका कारण त्यस्ता खसी, बोका, च्याङ्ग्राबाट तयार पारेका दशैंं परिकार, स्वस्थ पनि हुन्छन् । तपाईं आफैंले वध, काँटछाँट गर्नुभएको छ, मासु स्वच्छ पनि हुन्छ, सफा त त्यसै हुने नै भयो । यसो भयो भने दशैंंमा तपाईंले खाएको खुवाएको मासुबाट, मासुजन्य विषाक्ति हुन जोखिम कम हुनेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)